Rooble oo dhagaha ka fureystay baaqa mucaaradka | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo dhagaha ka fureystay baaqa mucaaradka
Ra’iisul Wasaaraha, ayaa wax kama jiraan ka soo qaaday qodobbo dhawaan ka soo baxay Golaha Midowga Musharixiinta Soomaaliya, oo ay walaac xooggan uga muujiyeen hannaanka ay ku socoto doorashada Golaha Shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa dhagaha ka fureystay baaqyada ka soo baxay golaha mucaaradka ee Midwga Musharixiinta, ee ku aaddan in la hakiyo doorashooyinka Golaha Shacabka ee boobka ku billowday.
Qoraalkii ugu danbeeyay ee ka soo baxay musharixiinta 9 December 2021, waxay ku baaqeen in la joojiyo doorashadda, lana qabto shir weyne ay isagu imaanayaan Beesha Caalamka, Dowladda dhexe, Maamullada, Bulshadda Rayidka iyo Musharixiinta.
Ra’iisul Wasaare Rooble, ayay sidoo kale, si gaar ah hore ula wadaageen in aysan aqbali doonin natiijada doorashada ka soo baxda, waxayna u gudbiyeen guud ahaan qodobbada ay cabashada ka qabaan.
Hayeeshee, Rooble, ayaa shalay qaaday tallaabo, uu ku muujiyay in xaafiiskiisu uusan waxba ka soo qaadi doonin hadallada mucaradka, wuxuuna kulan arrimaha doorashada la xariiray la qaatay Guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
War xukuumadda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in kulankaas looga hadlay dardar gelinta howlaha doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka ee ka soo jeeda Gobollada Woqooyi, taas oo caddeyneysa in Rooble, dhagaha ka fureystay Midowga Musharixiinta.
Rooble, wuxuu sheegay inuu xalliyay madmadowgii soo kala dhex galay siyaasiyiinta Soomaaliland, isla-markaasna la isku afgartay in horay loo sii wado howsha doorashada, hayeehee, xal uma hayo khilaafaadka [Cad-cad] iyo murunnada muuqda ee ka taagan doorashada guud.
Wuxuu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee Gobollada Waqooyi, ee soo xulaya ergooyinka dooranaya xildhibaannada Golaha Shacabka, hayeeshee, wax fursad ah uma hayo, la kulanka odayaada Banaadir, Galmudug iyo Koofur Galbeed ee matalaaddoodii la dhacay.
Kulankii Midowga ee dhacay dhamaadkii isbuucii hore, ayaa ahaa midkii ugu danbeeyay ee isugu yimaadaan si ay uga hadlaan doorashooyinka boobka ah, haddii aan shuruudaha ay soo bandhigeen la dhaqan galin, sida ay ilo xog ogaal ah u sheegeen Keydmedia Online.
Inta badan xubnaha Golaha Midowga Musharixiinta, oo ay ku jiraan Madaxweynayashii hore, ayaa la sheegay in ay ka go’an tahay in ka hor dhamaadka bishan December, ay qaadaan tallaabo ka dhan ah boobka doorashada, waxaana qorshaha ugu jia dhismaha Gole Qaran, oo xukunka la wareega.